बलिउड अभिनेता शाहरुख खान अमेरिकामा पक्राउ
२0७५ श्रावण ४ शुक्रबार
काठमाडौं, २८ साउन । बलिउड अभिनेता शाहरुख खानलाई अमेरिकाको लस एन्जल्स एरपोर्टका सुरक्षाकर्मीले हिरासतमा लिएर छाडेका छन् । आफू हिरासतमा रहेको जानकारी दिँदै शाहरुखले ट्वीट गर्दै भनेका छन् ‘म सुरक्षा अवस्थालाइ बुझ्न सक्छु र सुरक्षा जाँचको सम्मान पनि गर्न चाहन्छु । तर, म अमेरिका आउँदा प्रत्येक पटक अध्यागमनको अपमान सहनुपर्छ ।’
हिरासतमा रहेको बेला पोकेमोन गेम खेलेर समय बताएको पनि उल्लेख गरेका छन् । यसपटक अध्यागमनको हिरासतमा रहनु पर्दा साहरुखले अपमान महुशश गरेका छन् । हरेक पल्ट अमेरिका आउादा यस्तो व्यवहार सहनुपरेपछि विश्वकै चर्चित नायकले दिक्क पनि मानेका छन् । साहरुखले ट्विट गरेर यो कुराको जानकारी गराएपछि अहिले यसले भारतीय मिडियामा हंगामा मच्चिएको छ ।
केही समय अगाडि भारत भ्रमणमा आउँदा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले साहरुख खान भारतका लागि गर्व गर्नुपर्ने व्यक्ति भएको बताएका थिए । साथै उनले साहरुख अभिनित चलचित्र ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जायंगे’को गीत संवाद पनि बोलेका थिए । तर, अमेरिका जाादा धेरैजसो साहरुख अध्यागमनको लफडामा पर्ने गरेका छन् ।
शाहरुखलाइ अमेरिकी अध्यागमन विभागले हिरासतमा लिएको यो नै पहिलो पटक होईन । सन् २०१२ मा उनले न्युयोर्कको हवाई अड्डामा लगभग दुई घण्टा हिरासतमा बस्नु परेको थियो । पछि अमेरिकी विदेशमन्त्रीले यस बिषयमा माफी पनि मागेकी थिइन् । साहरुख यसपटक आफ्ना २ सन्तान आर्यन र सुहानाका साथ अमेरिका पुगेका हुन् ।
चटक्कै मायाको गीतको भिडियो सार्वजनिक ।
साउन्,२,२०७५ ।चटक्कै माया बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।गीतकार नयन अधिकारीको शब्द,संगीतकार अर्जुन पोखरेलको
नायिका प्रियंका कार्की र नायक आयुष्मान देशराज जोशीले गरे इन्गेजमेन्ट ।
असार्,३१,२०७५ ।नायिका प्रियंका कार्की र नायक आयुष्मान देशराज जोशीको इन्गेजमेन्ट भएको छ ।विगत डेढ बर्षदेखि एक अर्काको
चलचित्र ‘नाईं नभन्नू ल ५’को ट्रेलर यूट्यूबको ट्रेण्डिङ वानमा ।
असार्,२९,२०७५ ।चलचित्र ‘नाईं नभन्नू ल ५’को ट्रेलर यती बेला नेपाली चलचित्र प्रेमी दर्शक हरुको मन जित्दै चर्चा मा रहन सफल
चलचित्र ‘कायरा’ को 'सुखमा तिमी सगै हासु 'सार्वजनिक ।
चलचित्र ‘बाबु कान्छा’को नयाँ गीत सार्वजनिक ।
चलचित्र नाइ न भन्नु ल ५ को ट्रेलरमा इलाम भन्दा सेड्रीना मन पर्‍यो अनुभव लाई ।
चलचित्र ‘साली कस्को भेनाको’ ट्रेलर सार्वजनिक ।
चलचित्र ‘बाबु कान्छा’को निर्माण टिम प्रचार प्रसार मा ब्यस्त ।
Copyright © 2010 - 2015 nepalirajatpat.com and its related entities. All rights reserved.
Developed By: i-Tech Nepal